Manoratra i Tiorkia…. · Global Voices teny Malagasy
Manoratra i Tiorkia….
Voadika ny 17 Oktobra 2018 3:37 GMT
Iray amin'ireo fanehoana faratampony ny fahalalahana maneho hevitra ny fitorahana blaogy, na dia noheverina ho toy ny iray amin’ireo fahotana mahafaty aza izy (noho izy manampy ny hambon'ny mpanoratra): laharam-pahamehana amin'ny tontolontsika maoderina ny blaogy sy ny resaka aterany momba ny fahalalahana maneho hevitra. Nisy hetsika natao tao Tirokia izay nitondra ny resaka teo amin'ny fahalalahana maneho hevitra ho laharampahemehan'ny olom-pirenena Tiorka rehetra tamin'ity herinandro ity.
Firenena laîka i Tiorkia na dia mizolomanina avokoa aza ny ankamaroan'ny mponina ao aminy. ”Lohahevitra mafana” eny amin'ny toerana ankalamanjana ny resaka saron-tava efa am-polony taona maro izay. Vao haingana, nanapa-kevitra ny Tiorka mpitsara iray fa tokony tsy havela mandeha mianatra miaraka amin'ilay saron-tava ny mpampianatra mitondra izany (navela nanao izany izy ireo taloha raha toa ka nanala azy mialohan'ny hidirany ny faritry ny sekoly). Ho valin'izany, niditra tao amin'ny Fitsarana Avo ny lehilahy nitam-piadiana iray ary nanomboka nitifitra, izay niteraka ny fahafatesan'ny mpitsara iray avy ao amin'ny Fitsarana Avo.
Ambaratonga roa no nisehoan'ny hiakiaky ny vahoaka: ny diabe fanoherana ary ilay resaka momba ny fiboiboikan'ny Kemalisma raha oharina amin'ny fironana Islamika eo anivon'ny fanjakana. Nanomboka adihevitra io famonoana io, izay mety hakaton'ny manampahefana, izay efa nitranga im-betsaka tany aloha tamin'ny fotoana nisian'ny korontana tao Tiorkia. Izao no tian'i Mavi Boncuk ho lazaina:
Jadona sy tsy fahalalana irery ihany ny fampiasana ny fahalalahana maneho hevitra toy ny fialantsiny mba handavana ny fahalalahana maneho hevitra. Toy izany koa, tsy tokony hampiasaina mba hanenana ny famoahana an-kalalahana ny hevitra ao anatin'ny fari-pitsipika mazava sy ara-dalàna ilay fanafihana mahafaty nitranga vao haingana nahazo ny rafitra ara-pitsarana Tiorka .
Manana ity ho lazaina mikasika ny Silamo sy ny maha-Laika i Talk Turkey:
Manontany tena aho momba izay fiafaran'ny finoana silamo raha toa ka nidina tany amin'ny Tandrefana sy tany Amerika ohatra, izy raha tokony nankany amin'ny fiarahamonina miozolomanina ao amin'ny Akaiky, Afovoany ary Atsinanana ‘lavitry ny eto’ . Mety hoe tsy natokana ho an'ny miozolomanina ny finoana silamo. Jereo fotsiny izy ireo – ireo ”mpiambina” ankehitriny ary mbola ankasitrahan'ny finoana silamo foana. Hatramin'ny nanomezana azy ireo ity finoana ity, navelan-ry zareo ny fahavitrihany ara-poko, ara-pirazanana, ara-kolotsaina sy laïka, ary ireo fitiavany ny fankahalana saron'ny rehareha sy ny fitsarana an-tendrony, hihazona ny fandriana andriran'antsiny ara-pinoana mivandravandra. Nanafina ny tsy fahampiany teo ambanin'ny rakotra fanambadiana ara-pivavahana nandritra ny fotoana ela loatra izy ireo. Raha ireo taona maro natokana hanalavitra ny finoana tsy ho anaty Fanjakàna laïka, mety ho mifandanja kokoa raha toa ka ny laïka no notsoahana tsy ho anatin'ny finoana.
Vao miandoha ity tantara ity, hahaliana ny hahita hoe hatraiza no hitondran'ity adihevitra ity antsika.